Faarax C/qaadir oo ka hadlay Wararka Sheegaya in uu yahay Musharax (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir, oo kamid ah Siyaasiyiinta saameynta badan ku leh Dowlada Federaalka Soomaaliya ahna saaxiibka ugu dhaw Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay arimo dhoor ah kadib Wareysi Xasaasi ah uu bixiyay.
Waxa uu sheegay Faarax C/Qaadir in Dowlada Federaalka Soomaaliya uu Madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud ay guulo badan gaartay ayna qabatay intii ay jirtay waxqabad muuqda oo marqaati laga wada yahay.
”Dowlada hada jirta waxa ay qabatay waa wax muuqda oo ay marqaati ka yihiin umada Soomaaliyeed iyo caalamkaba, sida aad ogtihiin gobolada dalka kama jirin Nidaam iyo maamul, hadana waad la socotaan Maamulo ayaa loo dhisay gobolada, Doorashooyin ayaa dhacay , waxaad kale ogtihiin in Dowlada ay la wareegtay dhul badan oo horey uga maqnaa gacanta Dowlada sidoo kale amaanka wax badan laga qabtay” Ayuu Yiri Xildhibaan Faarax.
Waxa uu qiray Faarax C/Qaadir in uu yahay saaxiib aad ugu dhaw Madaxweynaha Soomaaliya, hasa ahaatee waxa uu meesha ka saaray in isaga ay ka go’do talada dalka gaar ahaan Go’aanada kasoo baxa Madaxweynaha Soomaaliya.
”Aniga Madaxweyne Xasan Sheekh Saaxiib baan la ahay waana la ogyahay taasi, laakin talada dalka maahan dukaan uu qof leeyahay uu sida uu rabo ka yeeli karo, qaran dhan koox iyo shaqsi ma maamuli karaan, Dowlada golayaal bay leedahay, oo Madax kala duwan ayey leedahay” Ayuu yiri Xildhibaanka Faarax C/Qaadir.
Waxa uu sidoo kale ka hadlay Xildhibaan Faarax Wararka sheegaya in uu yahay Musharax u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya, waxa uuna meesha ka saaray in uu yahay Musharax Madaxweyne waxa kale uu beeniyay in uu Musharax u yahay Maamulka loo dhisayo gobolada Hiiraan iyo Sh/Dhaxe.
”Aniga Maahi Musharax u taagan Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana leeyahay miro guntaada ku jira mid geed saaran looma daadiyo, waxaan taageersanahay oon raali ka ahay Madaxweynaha Soomaaliya kuna faraxsanahy, waxaan kaloo rabaa in aan Cadeeyo maahi Musharax u taagan maamulka Gobolada Hiiraan iyo Sh/Dhaxe,balse waxaan rabaa in dadka goboladaasi ay helaan maamul wanaagsan oo guuleesta” Ayuu mar kale Yiri Faarax C/Qaadir.
Xildhibaan Faarax Sheekh C/Qaadir oo xilal kala duwan kasoo qabtay Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa in uu yahay saaxiibka ugu weyn ee Madaxweynaha Soomaaliya, waxaa sidoo kale lagu xantaa in uu yahay shaqsiga ay ka go’do talada Madaxtooyada iyo go’aanada kasoo baxa Villa Soomaaliya.
Aas ballaaran oo Gaalkacyo loogu sameeyay Injineer Cumar Dheere (Daawo Sawirada)